१५ लाखभन्दा बढिले भरेको इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक कस्तो छ? हेरौं बिस्तृतमा। – Eps Sathi
१५ लाखभन्दा बढिले भरेको इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक कस्तो छ? हेरौं बिस्तृतमा।
January 20, 2021 876
बैंकले मिति २०७५ साल फागुन २२ गतेबाट औपचारिक रुपमा कारोबार सुरु गरेको थियो। बैंकको अधिकृत पूँजी ४० अर्ब रुपैयाँ छ भने जारी पूँजी २० अर्ब रुपैयाँ छ। सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरिएको आइपिओ बिक्री पछि बैंकको चुक्ता पूँजी २० अर्ब पुग्नेछ।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडमा नेपाल सरकारसहित अन्य संस्थाहरुको ६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ भने बाँकी ४० प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर रहेको छ।
Prevआउने भयो सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपिओ
Nextचन्द्रागिरी हिल्सको आइपिओ शुक्रबार बाँडिने, १० लाख ७१ हजार भन्दा बढिको हात रित्तो हुने।
नेपाल लाइफको ५१ प्रतिशत सेयर खाने नखाने, निर्णय गर्ने आज अन्तिम दिन।